विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन अर्थमन्त्री खतिवडा भारत प्रस्थान – Idea Khabar
विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन अर्थमन्त्री खतिवडा भारत प्रस्थान
आइडिया खबर२०७६ आश्विन १५, बुधबार १७:२१
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा असोज १६ र १७ गते भारतमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन आज नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेकाछन्।
सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दक्षिण एशियाको आर्थिक परिदृश्य विषयमा अतिथि वक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । साथै, उनले नेपालको विकास एजेण्डा, आर्थिक स्थिति, लगानीको वातावरणमा भएको सुधार, राजस्व क्षेत्रमा भएका सुधार लगायतका विषयमा समेत सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनेछन् ।
कार्यक्रमको समयमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विश्व आर्थिक मञ्चका अध्यक्ष बर्ज ब्रेण्डसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्नेछन् भने विश्वका आर्थिक क्षेत्रका नेताहरुसँग भेटघाटगर्ने कार्यक्रम छ ।
भ्रमणका अवसरमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र भारतीय समकक्षी अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणबीच भारतको अर्थ मन्त्रालयमा द्विपक्षीय भेटघाट हुने कार्यक्रम छ । पछिल्लो आर्थिक स्थिति, नेपाल–भारत सम्बन्ध, भारतले नेपालमा सहयोग गरेका आयोजनाको अवस्थालगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा असोज १८ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक यमन पौडेलले जनाएका छन् ।
२०७६ जेष्ठ २२, बुधबार ०६:४८
सभामुख कृष्णबहादुर महराको फेरी दोस्रो राजीनामा
२०७६ आश्विन १५, बुधबार १८:५५
भारतीय नक्सामा नेपालको सिमा मिचिएको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन,
२०७६ कार्तिक २२, शुक्रबार ११:३३